Yini okufanele ngigqoke uma ngishayela?
Uma uhamba ekilasini lokushayela, umfundisi wakho uzokutshela ngokushesha ukuthi udinga ukukhohlwa ngama-slippers, izicathulo nezithende, manje kufanele uvele ufake izingubo. Futhi uma umgwaqo ushisa emazingeni angu-30? Yini okufanele uyenze kulokhu? Ukugqoka kanjani ukuze kube mnandi futhi kube mnandi?
Izimoto zaseRussia ziqondile: zinezinyathelo ezinkulu, igesi elincane kanye ne-brake yokucabanga eside. Ukuze uhambe ucindezela i-gas pedal njalo, kodwa akucaci ukuthi kungani iphezulu, ngakho kunzima ukushayela imoto, kodwa ku-slippers akunakwenzeka. Okukhethwa kukho okwedlula kulolu cala kungaba amasinki, noma izicathulo eziphansi, noma ezinye izicathulo zezemidlalo ezikhululekile. Kuhle ukuthi namuhla, omusha imodeli yemoto, kulula kakhulu. Uma ukushisa emgwaqweni, hamba ukushayela ku-flip-flops noma izimbadada, ushintsho olufanele zibe amasinki.
Ngezimoto zangaphandle, isimo silula. Kulesi simo, cishe noma yikuphi, ukuthi yini owembethe. Uma ufuna ukufaka izimbadada ku-hairpin, sicela. Uma ufuna ukukhululeka ama-nice slaps - nawe ungakwazi. Ngeke ukwazi ukushayela imoto enjalo. Yiqiniso, ngaphambi kokuthi ungene ngemuva kwesondo esithendeni esiphezulu kungcono, hamba nje emotweni enjalo ngezicathulo ezijwayele futhi ezikhululekile, ukuze uqale uzizwe i-gas pedal futhi uphule.
Kumthethosivivinywa wezingubo ngokujwayelekile awukwazi ukuphula ikhanda lakho. Abantu abaningi bathi akunakwenzeka ukushayela ngesiketi. Lokhu kuyize. Yiqiniso, uma ingubo isincane futhi ide, ngakho-ke, kuyoba khona ukungathandeki. Kodwa ezinye iziketi zifanele kakhulu ukushayela. Uma befisa, bangakwazi ukuphakanyiswa kancane bese usho konke okuhle. Ngakho ungaqinisa kuphela amehlo omfana ohlala phansi noma indoda.
Yiqiniso, naphezu kokuthi sesike sibheke isimo ngesibhawl, kulula kakhulu ukugibela emagqumeni. Ikakhulukazi uma i-jeans. Zama ukugwema amabhulukwe we-silika, azokwehla esihlalweni.
Ebusika kunzima kakhulu ukubhekana nezingubo zangaphandle. Lapho uhlezi esiteshini, izingubo zezimvu, izimpahla zoboya nama-manto ziletha izinkinga ezithile. Ungazizwa njengomntwana, umama wami egqoke izingubo eziyikhulu. Ngakho-ke, abesifazane abaningi bagqoka isikhathi sebusika kalula: amanye ama-puhovichok, izicathulo zezemidlalo nama-jeans. Baqinisile, ngoba kukhululekile ukushayela. Nokho, lokhu akunakwenzeka njalo ukukhokhela. Ngokuvamile, umuntu kumelwe agqoke isicathulo esiqinile, isitifiketi nezembatho zangaphandle ezinhle. Yini okufanele uyenze kulesi simo? Isixazululo silula. Sondela emotweni, susa izingubo zakho zangaphandle ezinhle, uzibeke esihlalweni sangemuva bese uhlala kalula ngemuva kwesondo. Manje ukhululekile ukuya.
Amantombazane othandekayo: izinwele ezimnyama, ama-blondes, ama-brunette, abomvu, umbala futhi ancibilikile. Njalo ekuseni sichitha isikhathi esiningi siqoqa. Sichitha amahora ngesikhamo nesambatho seshaya ngaphansi kwesigqoko sokubeka izinwele zethu ezimbi. Kodwa ngokushesha nje lapho sihlezi ngemuva kwesondo, vula iwindi - nayo yonke imizamo yethu emakethe. Kusukela ngesivinini nangomoya izinwele zethu ziqhekekile. Ama-bangs ngaso sonke isikhathi awela amehlo, ezinye izintambo ezingajwayelekile zigibela emlonyeni futhi ngaso sonke isikhathi ziphazamisa ipompo yokushayela. Ngokuthembeka kuwe, amaphoyisa omgwaqo ngokuvamile akakwazi ukubekezelela abesifazane zarulem. Ikakhulukazi bazizwa bengakuthandi amantombazane ngezinwele ezinde, ezikhululekile, bakholelwa ukuthi ngesivinini bazovala amehlo abo futhi benze isimo esiphuthumayo emgwaqweni. Angakakhulumi umthetho lapho uthi asikwazi ukugibela nge-hairdo kusihlwa noma ngezinwele ezivulekile. Kodwa uma uqala ukushayela imoto, kungcono, ukuthi, ukuthatha izinwele zakho emuva ukuze zingakuvimbeli ukuba ushayela.
Ake sikhulume manje ngekhanda eliyinhloko. Izindebe ezinama-caps amakhulu amancane zingcono ukungazigqoki, zinciphisa ukubonakala. Ngaphezu kwalokho, imoto kuwo iyashisa.
Izibuko. Abanye abashayeli bamalungelo babonisa ukuthi ungakwazi ukulawula imoto kuphela ngamalensi noma izibuko zokuxhumana. Uma uyintombazane encane, cishe awunakwenzeka ukuya ezibukweni ... Ngokuvamile, uma ungekho embi, uhlukanisa phakathi kwezimpawu zomgwaqo kanye nezibonakaliso zamatshe ezithuthi, ungakwazi ukulahla izibuko. Futhi uma beyeka amaphoyisa abathandekayo emigwaqweni futhi behlupha nge-sraksprosami, bese ucabangelela ngenye indlela yezinganekwane, njengokuthi unama-lenses angabi nombala kakhulu ongakwazi ukuwabona. Kuzodingeka akholelwe wena, angeke akuyise ku-oculist.
Kodwa-ke, uma unayo iqiniso, amehlo angaboni kahle, khona-ke ungenzi ngaphandle kombukiso. Thatha izibuko ezizokufanisa kangcono ngefomu. Ungabumnyama kancane bese kungabikho ozobona ukuthi unenkinga ngokucabangela. Ngokuphambene nalokho, wonke umuntu uzocabanga ukuthi ungowesifazane wesimanje nowesimongqondo ovikela amehlo akhe ezicini zangaphandle.
Kuyafaneleka ukukhuluma ngezibuko. Ngokushayela, badinga nje noma nini unyaka. Ehlobo bawasindisa ekukhanyeni kwelanga, nasebusika bevela eqhweni elimhlophe eliphuphuthekile. Ekwindla bazosivikela ezikhanyeni zezimoto ezizohlangana nazo, indawo evela kuyo yonke into ngesikhathi esisodwa.
Thenga izibuko ezihlukene ezivela elangeni, okuzohlala njalo emotweni yakho. Ungathatha izibuko kuzo zonke izintandokazi. Emotweni udinga okuthile okusebenzayo futhi ukhululekile. Qinisekisa ukuthi ingilazi ayilula kakhulu. Ephelele ngokudla izibuko ze-glass, zishintsha umbala weglasi, kuye ngokuthi ngabe ilanga likhanya nokuthi likhanya kanjani. Khetha ukuthi yini oyithandayo kakhulu. Kodwa khumbula ukuthi kuhle kakhulu kwiqhwa elimhlophe kanye nelanga elingcolile ukuvikela izibuko ngezibuko eziluhlaza.
Ukuphikisana ngesihloko sezingubo ezikhululekile zokushayela imoto kungase kube yisikhathi eside, ngoba wonke umuntu unenambitheka yakhe nesitayela sakhe, omunye uyathanda isitayela esiyingqayizivele, nokunye okuthandayo kwezemidlalo. Ngakho-ke, wonke umthandi wokushayela yena kufanele anqume ukuthi yini ekulungele yena. Wonke owesifazane unezicathulo zakhe ezizithandayo nezinto ezithandayo. Ngezinye izikhathi nge-skirt kanye ne-high-heeled, sinomuzwa othembekile futhi ukhululekile kunezicathulo nama-sneakers.
Bheka, wena ugqoke izingubo zakho, ulungele umgwaqo, ungene ngemuva kwesondo bese uhamba. Kuthiwani uma kukhona inkathazo encane, isibonelo, inkinobho yezinwele phakathi kwephansi kanye ne-gas pedal? Ngokwemvelo, izazi zithi akudingeki ukwesaba futhi uzidonsa ndawonye. Kodwa thina, besifazane, kunzima kule nkinga ukuzilawula.
Okukhethwa kukho ukuvula "okuphuthumayo" futhi ngokushesha ngangokunokwenzeka ukumisa, masinyane, kufanele ume ngokushesha ngaphandle kokusebenzisa ibhulogi. Awudingi ukugubha umlenze wakho ngokugqamile ukuze ungalimazi. Uma ungenayo isikhathi sokwakha kabusha emgqeni ongakwesokudla futhi ume emgwaqeni noma endleleni yomgwaqo, yima ngokushesha emgqeni ohamba kuwo. Ukubonisa ukukhanya okuphuthumayo kuzonikeza ithuba lokuqonda izimoto eziza kuwe, ukuthi kufanele uhambe, ngakho ngeke kube khona izingozi. Kungcono ukubona lesi simo njengesidingo somgwaqo ngokukhululwa kwe-adrenaline, okuzophela maduzane. Ezinsukwini ezimbalwa uzotshela abangane bakho ukumomotheka ebusweni bakho ukuthi bazama kanjani ukubuyela enyaweni yakho futhi bangalimazi izicathulo zakho.
Umklami Valentino Garavani no-Valentino brand
Izingubo zasebusuku nezibonakaliso zezinkanyezi
Ukuthenga kwe-Spring kusuka Okulandelayo: izingubo zazo zonke ukunambitheka
Ukuthenga izingubo kwi-intanethi
Amamodeli wezingubo ezigcwele ama-knitwear
Iziketi eziphathekayo 2015: yini okufanele ugqoke onobuhle bemodeli
Siyakuhalalisela ngoSuku lukaValentine kumama: izinkondlo ezinhle nezomzwelo
Izimonyo zokuhlobisa i-lancome
U-Alla Berger utshele ngokuphila ngemuva kombukiso othi "Bach" isizini sesine no-Alexei Vorobyov
Ukubhula okunamnandi - amakhukhi nezibikezelo
I-Cream yokuxoshwa kwezindawo eziseduze
Feijoa noshukela, izindlela zokupheka ezinhle nezithombe
Isaladi kusuka erayisi yasendle
Ukufa komuntu othandekayo: usizo lomqondo
Uhlobo luni lokudla oludingekayo ekuqotheni izingane?
Umhluzi kusuka kubhekeni
Ukunakekelwa kwezinwele ekhaya: imithetho kanye nezincomo
Yiziphi iziphuzo akufanele zisetshenziswe ekushiseni?
I-pepi ebhaliswe nge-bright bright paper